Isamsung yazisa i-Galaxy J4 + kunye ne-J6 + eSpain | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy J4 + kunye ne-J6 + zifika eSpain
UEder Ferreño | | Samsung
Ngaphezulu nje kweveki edlulileyo iSamsung yazisa ngokusemthethweni Iifowuni zayo ezimbini ezintsha, iGalaxy J4 + kunye neJ6 +. Iimodeli ezimbini apho inkampani yaseKorea igqibezela icandelo elisezantsi-phakathi kwinqanaba elingaphezulu. Sele sikuxelele yonke into malunga neefowuni, onokuzifunda kwesi sixhobo. Ngoku, ukumiliselwa kwayo ngokusemthethweni eSpain sele kubhengeziwe, ke siyazi ngakumbi iinkcukacha.
I-Galaxy J4 + kunye ne-J6 + zaziswa ngaphambili kunokuba bekulindelwe. Ukumiliselwa kwabo kuya kwenzeka kwiveki ezayo, ke ngeentsuku ezimbalwa kuya kuba lula ukuzithenga ngokusemthethweni eSpain.
Uluhlu lweGalaxy J yenye yezona zithengiswa kakhulu kwikhathalogu yeSamsung. Ke ezi modeli zimbini, zizisa iinkcukacha ezintsha kunye noyilo olwahlukileyo, zinokuthengisa kakuhle ngaphakathi kuyo. Ingakumbi imodeli ephezulu kunye nekhamera yayo ngasemva ezimbini.
Sibona indlela inkampani yaseKorea etshintsha ngokuthe ngcembe ngayo uluhlu lweefowuni. I-Galaxy J4 + kunye ne-J6 + ngumzekelo olungileyo woku. Uyilo olune-18: 9 isikrini, isivamvo secala lomnwe osecaleni, Kwaye kwimeko yemodeli ephezulu, igumbi eliphindwe kabini. Isamsung iqala ukwazisa ikhamera ezimbini kumanqanaba amaninzi nangaphezulu.
Enkosi ngokusungulwa kwayo, amaxabiso ezi modeli zimbini eSpain abonakalisiwe. Inkqubo ye- Ixabiso leGalaxy J4 + liya kuba ngama-189 euros, kwaye iya kufumaneka ngegolide, epinki kunye nemibala emnyama. Kwelinye icala, i-Galaxy J6 + iya kubiza kakhulu, ngexabiso elisemthethweni lama-239 euros. Iya kuthengiswa ngemibala emithathu: obomvu, igolide kunye nomnyama.
Ukuqala kule veki izayo ungathenga i-Galaxy J4 + kunye ne-J6 + ngokusemthethweni eSpain. Ziya kufumaneka kwiindawo zeefowuni eziqhelekileyo ze-Samsung. Ke kuya kuba lula kuwe ukubafumana, kokubini kwiivenkile ezibonakalayo nakwi-Intanethi. Siza kubona ukuba abathengi bazifumana njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy J4 + kunye ne-J6 + zifika eSpain
Yintoni esinokuyisebenzisa ngeBluetooth kwifowuni yethu ye-Android
Ungazikhusela njani kwizicelo ze-Android kuhlaziyo